Sidee si sax ah madaxa looga xiiraa? | Ragga Stylish
Manu RS | | Daryeelka shaqsiyeed
Markii militerigu jiray, mid Waxaan bartay ku dhowaad xoog inuu timo u xiiro eber sidaa darteed waa inuu iska ilaawo dhowr toddobaad illaa uu dib uga soo laabanayo. Xaqiiqdii, hadda, markii aad tahay nin militari ah, sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu helo muuqaalka muuqaalka ugu fiican si aadan ugu baahnayn inaad makiinadda uga gudubto saddexdiiba saddexdii.
Laakiin sida ay noloshan ugu dhacdo waa muhiim og xeelado kala duwan ama talooyin si ficilkan ah timaha kor looga saarayo uu yahay kan ugu jilicsan oo aan lahayn dhibaatooyinka ugu yar. Marka la soo gaabiyo, waanu ku bari doonaa sida loo xiirto madaxaaga iyo waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u sameyso oo aan madaxaaga qatar gelin.
1 ?‍♂️ Waxyaabaha ugu horreeya marka hore: qalabka ugu fiican ee timaha jarista
1.1 ? Talooyin ku saabsan iibsashada timo jarista
2 ? Kahor intaadan bilaabin inaad isticmaasho mashiinka
3 ?‍? mashiinka marada
4 ? Talooyin ku saabsan xiiritaanka madaxaaga
5 ? Dhab ahaantii
?‍♂️ Waxyaabaha ugu horreeya marka hore: qalabka ugu fiican ee timaha jarista
Waa muhiim inaad nala yeelato koox fiican oo awooda noo soo bandhig natiijooyinka ugu fiican. Iyo sida had iyo jeer dhacda, waxaan heli karnaa qiimayaal kala duwan, in kasta oo runtu tahay in ilaa € 22 aan heli karno mashiin aan si wanaagsan isugula jaanqaadno.
Waan heli karnaa Remington HC5030 € 23 oo ah xulashada ugu jaban. Haddii aan horay u tagnay qiime wanaagsan oo xagga lacagta ah waxaan haysannaa nooc ka ballaaran oo leh Remington HC5810 oo ku kacaya € 47, haddii aan horayna u aadnayna heer kale waxaan uga gudbi karnaa Panasonic ER-1611 oo ah € 123.
Haddii aad rabto xulasho ka mid ah alaabada ugu fiican ee madaxa xiira, fiiro gaar ah u yeelo tan xulashada alaabta.
? Talooyin ku saabsan iibsashada timo jarista
Qalabka timaha loo isticmaali karo timaha qalalan iyo kuwa qoyan labadaba noqon muhiimadda weyn waqtiyo kala duwan sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad eegto qodobkaan
Mashiin aan fiilooyin lahayn waxay ku siin doontaa kala duwanaansho fiican markaad isticmaaleyso, maxaa yeelay mid xadhig leh ayaa ka hor imaan kara. Dhowr yuuro oo dheeri ah waxaanuna ku heshiin doonaa iibsashada mid sidan oo kale ah
Kaalay oo leh qalab kala duwan si goosashadu u fududaato waa muhiim in kastoo aysan ahayn waji aasaasi ah
Waxyaabaha garbaha waa ikhtiyaar kale oo laga fiirsado
Iyo in la soo afjaro miisaanka mashiinka waxaa lagugula talin karaa inaysan ka badnayn sida ugu habboon ee aad si fiican ula macaamili karto
Faahfaahin kale oo lagu xisaabtamayaa waa iibsashada jarjar meelaha ugu adag sida agagaarka dhagaha, qoorta iyo foodda. Dukaammada waawayn waxaa ku yaal ikhtiyaarro wanaagsan oo ka yar € 20.
? Kahor intaadan bilaabin inaad isticmaasho mashiinka
Si ay wax walba si habsami leh ugu socdaan, waa inaan si wanaagsan uga taxaddarno in mashiinku, haddii uu yahay mid xirfadle ah, waa dufan tahay. Hal ama labadii biloodba waa muhiim inaad ku darto dhibic si ay garbaha u yeeshaan saamaynta ugu fiican ee suurtogalka ah.
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah garbaha nadiif yihiin, sidaa darteed waxaa si weyn lagugula talinayaa inaan kala qaadno ka hor intaanan u gudbin jarista lafteeda. Kuwa jaban badanaa waxay leeyihiin nadaafad oo u dhiganta nooc caday ah oo si weyn u fududeeya shaqada.
Marka la eego saliida, sida caadiga ah tilmaamaha mashiinka yimaado habka loo codsado iyo haddii mashiinka noocaas ahi runtii u baahan yahay. Sidaan soo sheegay, dhammaantood isku tayo ma aha, markaa dayactirkoodu wuxuu ku xiran yahay dhowr arrimood. Xirfadlayaashu waa inay codsadaan dhibic saliid ah.
Kahor intaanan u dhaqaaqin tillaabadan waa inaan haysannaa garbaha oo si nadiif ah u nadiif ah, markaa waa muhiim inaan ka gudubno daqiiqado yar ayaa ka tagaya sidii oo aan markii ugu horreysay ka soo saarnay sanduuqgeeda.
Goorma waxaan ku dabaqnay dhibicdiiHadda waa inaan daarnaa mashiinka ilaa 20 ilbidhiqsi si markaa si fiican loo dubo oo diyaar loogu noqdo timaha jarista.
?‍? mashiinka marada
Haddii aan leenahay timo aad u dheer, waxaa lagugula talinayaa inaan isticmaalno tirada ugu badan inaynu fududeyno waxyaabaha, maadaama haddii aan aad ugu tagno xididka ay noqon karto mid culeys badan oo aan ku gooyo daqiiqado yar gudahood.
Maaddaama aan horeyba u jareyno dhammaan aagagga, annaguna horay ayaan u gooynay waxaan toos ugu aadnaa 1 ama 3 inaan u jarno sida aan rabno, had iyo jeer iyada oo ikhtiyaar u ah inaan u dhigno 0 inay noqoto mid gebi ahaanba timo la'aan ah.
Sida timo jar kasta, waxaa lagugula talinayaa taas mid u aad timo jaraha, laakiin qiimaha mashiinada qaarkood oo hooseeya awgood, maanta qofku wuxuu lacag fiican ku badbaadin karaa xarumahaas oo u dhexeyn kara € 6 ilaa € 18 iyadoo kuxiran aagga aad ku nooshahay.
? Talooyin ku saabsan xiiritaanka madaxaaga
Tan koowaad waa timo hagaagsan, ha ahaato mid dheer ama mid gaaban. Nadaafada kaliya maahan laakiin maxaa yeelay waxay umuuqataa sida ugufiican ee macquul ah, marka laga reebo xaqiiqda ah inay kuhaboontahay kahor jarista ama, sida qoraalkan, xiirista
Waa muhiim isticmaal xumbo xiiran madaxa oo dhan si looga fogaado xanaaqa ama dhaawacyada suurtogalka ah.
Waa inaan mari mandiil dareenka koritaanka timaha. Tani waxay ka dhigeysaa timaha mid aad u yar, sidaas darteedna in marinka labaad oo fiican ay horeyba u noqon karto sida aan dooneyno.
Haddii aan horeyba u aadnay jihada ka soo horjeedka, waan haysan doonnaa diyaar u ah inay si fiican u xiirto sidii aan rabnay.
Lo horta waa hore, ka dibna dhinacyada oo ugu dambayntii waxaan u dhaqaaqi karnaa xagga dambe annaga oo kaashanayna qof. Halkaan oo aan haysanno muraayad gacmeed iyo muraayad hore waxay noo sahleysaa xitaa inaannaan u baahnayn qof hawshan qabta. Dulqaad yar maadaama daqiiqado aan si fiican u diyaarin doono.
Waa muhiim inaad haysato tuwaal qoyan si loo soo saaro haraadiga xumbada iyo timaha haray. Maxaa la dhahaa in maydhashada qubayska ka dib ay ku habboon tahay inaadan ka tagin musqusha timaha u muuqda kuwa aan dhammaad lahayn
Waxaan codsaneynaa a qoyaanka madaxa si uusan u engegin ama u xanaaqin.
Nidaamkan waxaan isku dayi doonaa inaan markale sameyno markaan aragno inay bilaabeyso inay aad u koraan.
? Dhab ahaantii
Iyada oo intaas oo dhan la sheegay, waxaad heli doontaa talooyinka ugu fiican si fiican u xiir timaha oo yeynaan qaadan wax goyn ama cuncun ah oo dhibsado markaan dooneyno inaan mar dambe saaxiibbo la aadno oo aan habeenka ku raaxeysanno. Markaa ha moogaanin ballanta kahoreysa talooyinkaas kale ee aan Ragga uga bilowno qaab ahaan oo aan aad u jecel nahay inaan wadaagno oo aan siino.
Ma ogtahay talooyin dheeraad ah oo laga yaabo inay faa'iido leeyihiin markay tahay madaxa xiir? Noo sheeg sidee tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sidee si sax ah madaxa looga xiiraa?
Goor dambe laakiin fikradayda ayaa socota: Waxaan haystaa 4 sano oo aan madaxayga xiirayo.
1. Waxaan sameeyaa labadii maalmoodba mar, haddii horay loo dammaanad qaaday, mar labaad ayaan sameyn doonaa.
2. Had iyo jeer waxaan ku sameeyaa gadaal iyo gadaal
3. Markaan kareem lahayn waxaan isticmaalaa saabuun
4. Marnaba ma xanaaqsana
5. Haa Waan shilalka iga galay, laakiin way yar yihiin.
6. Waa wax lagu farxo inaan bidaar yeesho, iyo inaan timo leeyahay.
Jawaab ku sii JoiJoi
Waan jeclahay faallooyinkaaga sidaas ayaan sameeyaa
Aniga ahaan sidoo kale farxad bay ii tahay inaan bidaar yeesho maxaa yeelay bidaar ayaa ii socota
Waa fome isku mid ah maxaa yeelay waxaan ahay 23 laakiin waxaan u maleynayaa inaan jeclahay inaan bidaar noqdo
is ogow loquillo habsiinta meel fog
Anigu waxaan ahay bidaar sanado, marka laga soo tago taas waxaan haystaa timo aad u toosan oo wanaagsan oo dhibaatadayda ka sii daraya, waxaan rabaa inaan xiiro maadaama aan haysto mashiinka, laakiin shaki ayaa iga jira, haddii aan isticmaali jiray 0 ama 1? Mise isku dar? Waxaan ahay 24 sano 🙁
Waxaan ahay 25 jir timo la’aanna waan iska ahaa tan iyo markii aan 22 jir ahaa .. waa sidaan idhi oo waan kufsaday! Ma aanan dooneyn inay sidaas noqoto laakiin markaa waan jeclahay oo si caadi ah ayaan u sameeyaa labadii ama seddexdii maalmoodba mar mar walba .. Waa caado waana jeclahay! Sidee ayey kaaga dhigeysaa inaad kufiicnaato naftaada daryeelka sawirka! Waa inaad noqotaa javi wanaagsan !! Had iyo jeer wajiga ugu fiican !! Isaga
Waqtiga aad igu shubatay Oscar, horey ayaan u xiiray hehe, waa wax aad ufiican oo raaxo leh, waxaan la ildarnaa qolofta oo aan timo aan wada nadiif aheyn madaxana waan bogsaday horeyba waan u xiiray laba jeer marka laga reebo "0" mandiil Xiirashada, muuqaalku waa mid raaxo leh, runtu waxay tahay, waxaan ka fakarayaa inaan sidaa sii ahaado. Waad ku mahadsantahay jawaabtaada.
Waxaan xiirayaa dhinacyada madaxayga tan iyo markii aan go'aansaday inaan sameeyo mohawk, laakiin dhibaatadaydu waa tan soo socota, ma waxaan isticmaalaa mandiil guud (sida Gillette) okay mise inaan isticmaalo mandiil koronto? Wax dhib ah kuma qabo isticmaalka Gillette laakiin waa xoogaa dhib badan oo gaabis ah
Kuma talinayo inaad iibsato mashiinka remington, dhibaatooyin ayaa i soo maray maalintii ugu horreysay, xagga awoodda (aad u hooseysa) iyo gabal caag ah oo muhiim ah ayaa burburay (aad u jilicsan). Haddii aad u isticmaali doontid nolosha, lacagta ku bixi. Laga soo bilaabo 45 euro. Braun waa tallaal badbaado leh. Saaxiib bidaar leh
Waxaan u janjeeraa inaan madaxayga xiirto, markaan sameeyo labadii maalmoodba mar sifiican ayey u qulqulaysaa, marka sababo jira awgood ma aysan dhicin oo waxaan qaataa maalmo dheeri ah, marka hore mashiinka maqaarka iyo kadib xiirashada. MNe waan jeclahay, sifiican ayaan u socdaa. Sidoo kale, runtii waan xiiraa jidhkayga oo dhan.
Ku jawaab Marcos.